April 2017 - Page 11 of 12 - Puntland Mirror Believable Media Website
Ugu yaraan 60 qof oo ku dhimatay duqayn loo adeegsaday kiimiko oo ka dhacday waqooyiga-bari ee dalka Suuriya
April 4, 2017 Puntland Mirror 0
Dimishiq-(Puntland Mirro) Ugu yaraan 60 qof ayaa lagu dilay tobonaan kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar looga shaki qabo duqayn kiimiko oo ka dhacday gudaha waqooyiga-bari ee dalka Suuriya, sida ay sheegeen kooxda dabagalka Suuriya. […]
Muqdisho-(Puntland Mirro) Afar shaqaalaha gargaarka ah oo u shaqaynayay haayada caafimaadka aduunka ee WHO ayaa waxaa afduubtay maleeshiyo katirsan Al-Shabaab. Shaqaalaha oo Soomaali ah, ayaa lagu afduubtay gudaha degmada Luuq ee gobolka Gedo gelinkii dambe […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah ka dhoofay garoonka diyaaradaha kumeelgaarka ah ee Kanooko ee kuyaala duleedka caasimada Garoowe, isaga oo u safray dalka Isutaga Imaaraatka Carabta. Kahor inta […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Kuwo looga shaki qabo Burcadbadeeda Soomaaliya ayaa dooni ganacsi ku afduubtay xeebta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya, sida uu sheegay sarkaal. Guddoomiyaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug, Cabdulaahi Axmed Cali, ayaa warbaahinta dowladda […]
Galkayo-(Puntland Mirror) Suspected Somali pirates have hijacked a commercial boat off the coast of Mudug region in central Somalia, official said. Mudug’s Hobyo district commissioner, Abdullahi Ahmed Ali, told state-run Radio Mogadishu that the boat […]
April 3, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Burcadbadeeda Soomaaliya ayaa afduubtay markab shixnada qaada oo laga leeyahay Hnidiya oo ay saarnaayeen 11 shaqaale ah, sida uu ku waramay taleefishinka Hindiya laga leeyahay oo la dhaho Times Now TV. Dhacdada ayaa […]
Garowe-(Puntland Mirror) Somali pirates have hijacked Indian cargo ship with 11 crew members onboard, India’s Times Now TV reported. The incident took place on Saturday, and the ship was carrying shipment from Dubai to Yemen’s […]
April 2, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay tuulada Sheerbi ee gobolka Karkaar, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Shilka ayaa xalay oo Axad ahayd gelinkii dambe dhacay kadib markii […]
Garowe-(Puntland Mirror) At least four people were wounded in truck accident in Sherbi village of Karkar region, resident said. The accident took place late on Sunday when a truck carrying livestock and rural family swerved […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaare ku xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynak ayaa maanta oo Axad ah yimid caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Raysulwasaare ku xigeenka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku qaabilay dhiggiisa Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo […]
Gobolada Puntland oo laga roob doonay
Garoowe-(Puntland Mirror) Gobolada Puntland ayaa maanta oo Khamiis laga oogay salaada roob doonta kadib markii dowladu ay iclaamisay. Garoowe, boqolaal qof ayaa isugu tagay duleedka waqooyi ee magaalada iyaga oo halkaas ku oogay saalada. Madaxweyne [...]